Sarkaal Sare Oo Shiicada Looga Dilay Suuriya. – Bogga Calamada.com
Sarkaal Sare Oo Shiicada Looga Dilay Suuriya.
Hogaamiye Meliteri oo ka tirsan Ururka Xizbu Sheydaan oo lagu magacaabo Xaatim Xamaadah ayaa dhintay, mid kalena wuu dhaawacmay kadib markii gaarigii ay la socdeen Qarax lagula eegtay magaalada Xalab ee dalka Suuriya, iyadoo dhimashada Sarkaalkan ay tirada Maleeshiyada Ururkaasi ee 24kii saac ee lasoo dhaafay lagu dilay magaalada Xalab ay ka dhigeyso 24 Askari.
Xaatim Xamaadah waxa uu ka tirsanaa Saraakiisha sar sare ee Guutada Al-Ridwaan ee Ururka Xizbu Sheydaan, waxaana uu madax u ahaa kumanaan ka tirsan Maleeshiyaadka Ururkaas oo ku sugan Mandiqadda Al-Qalamuun ee duleedka magaalada Dimishiq, degmada Al-Zabadaani iyo magaalada Xalab.
Maalmo ka hor hogaamiyaha Ururkaasi Xasan Nasru Sheydaan ayaa ku goodiyay in Ururkiisa uu sii wadayo dagaalka uu kaga jiro dalka Suuriya, isagoona tilmaamay inay sii wadayaan waxa uu ku sifeeyay dagaalka ay ku difaacayaan Muqadasaatka barakeysan oo uuÂ ula jeedo Macaabidda ay barakeystaan Rawaafidda ee kuyaalla magaalada Dimishiq.
Ilo wareedyo dhanka ammaanka ah oo ku sugan dalka Lubnaan ayaa ku warramaya in tan iyo markii ay billaabatay fara gelintii Ururka Xizbu Sheydaan ee dalka Suuriya Shan Sano ka hor in dagaallada halkaas ka soocnaya inay ku waayeen inkabadan 1500 oo dagaal yahanadooda Â ka tirsanaa, iyadoona 350 ka mid ah ay dhinteen Sanadkan aan ku jirno.
Ururka Xizbu Sheydaan waxa uu qeyb ka yahay Isbaheysiga ay hogaaminayaan Dowladaha Iiraan iyo Ruushka kuwaas oo kaalin xoog leh ka geystay sidii uu usii jiri lahaa Nidaamka Nuseyriga ee Bashaar Al-Asad ee gumaadka ku haya Muslimiinta Ahlu Sunnaha ah ee dalka Suuriya, waxaana Maleeshiyada Ururka Xizbu Sheydaan ka sokow dalkaasi ku sugan Kumanaan kale oo Maleesiyaad Shiico ah, kuwaas oo laga keenay Waddamada Ciraaq, Afghanistan iyo Pakistan.